Go Warriors Go: Vatsigiri | Kwayedza
14 Jan, 2021 - 13:01	 2021-01-14T13:06:47+00:00 2021-01-14T13:06:47+00:00 0 Views
VATSIGIRI venhabvu vanoti chikwata chenyika chemaWarriors chinoda minamato yakasimba apo chiri kunanga kuCameroon kunokwikwidza kumutambo weAfrican Nations Championship (CHAN) uyo unotanga nemusi weMugovera.
Rwendo rwemaWarriors rwekuenda kumutambo uyu rwange rusiri nyore sezvo gadziriro dzacho dzakambosvika pakumiswa zvichitevera kubatwa kwainge kwaita vatambi 15, kusanganisira dzimwe nhengo dzechikwata ichi, nechirwere cheCovid-19.
Chikwata chaZdravko ‘Loga’ Logarusic chakasimuka nemusi weChitatu chakananga kuCameroon uko chichanovhurira mutambo weCHAN chichisangana necheIndomitable Lions cheCameroon.
Muhurukuro neKwayedza, mutungamiri wesangano reFriends of the Warriors – Edward Chimedza – anoti makwikwi eCHAN egore rino akasiyana neemakore adarika nekuti maWarriors achange asina vatsigiri.
“Tange tiri kuona zvange zvichiitika mune mitambo yakasiyana yakadai seweFC Platinum, kubirirwa kwayange ichiitwa pachishandiswa Covid-19. Saka tiri kuzvityirawo kuti ndizvo zvinogona kuitika kumaWarriors edu paari kuenda kuCameroon. Tinoda kuti anohwina pasina kubirira uye tiri kuda kuona nhabvu inonakidza ichitambwa.
“Saka isu chatichangoita sevatsigiri kungoisa minamato yakasimba kuti vakomana vedu vanotimirira uye rwendo rwavo rwunge rwakajeka rwuchiendeka,” anodaro Chimedza.
Chikwata cheFC Platinum masvondo adarika chakaenda kuTanzania uko chakatamba necheSimba Football Club mumutambo wechipiri wekurwira kuenda kumakwikwi eCAF Champions League group stages.
Vatambi veFC Platinum vachisvika kuTanzania, vakaongororwa denda reCovid-19 asi havana kuziviswa zvakabuda muongororo iyi pachiri nenguva.
Chikwata ichi chakazoziviswa kwasara maawa maviri kuti mutambo uyu uchitanga kuti vatambi vacho vashanu vane denda iri izvo zvakakatyamadza FC Platinum ndokukanganisa hurongwa hwavaive vanaho.
FC Platinum yakazokundwa mutambo uyu 4-0 zvakaita kuti ibve yaburitswa mumutambo uyu.
Mutsigiri mukuru wenhabvu Adomsi ‘Admoski’ Mukwasi anoti chikwata chaLoga chakasimba zvikuru uye chichanokonzeresa kumutambo uyu zvekuti chichasvika kuquarter-final chaiko.
Munhorowondo yemaWarriors kuCHAN, mugore ra2014 chikwata ichi chakasvika kusemi-fainari yemutambo uyu uko chakazoburitswa neLibya 5-4 kumapena mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 0-0.
Adomski anoti maWarriors achanyora nhorowondo zvakare gore rino kuCameroon uye vanoda minamato yenyika yese kuti vanokunda.
“Isu mumutambo weCHAN tagara hedu tinositamba zvinonwisa mvura saka naizvozvo tiri kutarisira kuti Loga nevakomana vake vachanotibatira basa. Tichavaisa mumitamato yedu kuti vatambe zvinonwisa mvura uye vagonobudirira kuCameroon.
“Chikwata chedu chakasimba uye vatambi vacho vane tarenda rinodadisa,” anodaro Adomski.
Zvakadaro, maWarriors ari kuenda kumutambo uyu ariwo chikwata choga chiri kubva kunyika isiri kutambwa nhabvu pari zvino nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Gore rapera, nhabvu haina kumbobvira yatambwa munyika muno nekuda kwedenda iri uye pari zvino hazvisati zvave zivikanwa kuti mitambo yePremier Soccer Leage ichatambwa here.